Izinsizakalo Zokuqamba Ukuthengisa Nokuqasha in Singapore
Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya in District 10
Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya in Central
Ishicilelwe ngu max william
ukubuka Abahlinzeki Bezimali Ngezimali eshicilelwe 2 years ago
Ishicilelwe ngu osman ibrahim
Ishicilelwe ngu chong in peng
Khetha isigabaAccommodations Spare roomsResidential homes HousesBusiness Directory Financial Service Providers Home Improvement Contractors Furniture Companies
I-Singapore ((lalela)), ngokusemthethweni iRiphabhulikhi yaseSingapore, iyidolobha lesifundazwe elisolwandle elisolwandle eSoutheast Asia. Ilele cishe endaweni eyodwa ebangeni elingamakhilomitha angama-137 noma amakhilomitha angama-85) enyakatho kwekhwetha, emaphethelweni aseningizimu yeNhlonhlo yaseMalawi, emngceleni weStraits of Malacca ngasentshonalanga, iziQhingi zaseRiau ngaseningizimu, kanye neSouth China Sea kuya empumalanga. Indawo yezwe yakhiwa isiqhingi esisodwa esikhulu, iziqhingi ezingama-63 neziqhingi, nesiqiwi esisodwa, indawo ehlangene ikhuphuke ngamaphesenti angama-25 selokhu izwe lathola inkululeko ngenxa yamaphrojekthi amakhulu wokuvuselela umhlaba. Izwe liyikhaya lezakhamizi eziyizigidi ezingama-5.7, ezingama-61% (izigidi ezi-3.4) zazo eziyizakhamizi zaseSoviet. Kunezilimi ezine ezisemthethweni zaseSingapore: isiNgisi, isiMalay, isiShayina, nesiTamil; nesiNgisi njengolimi lwe-lingua franca nesiMalay njengolimi lukazwelonke. Lokhu kukhombisa ukwahlukahluka kwamasiko abo okuhlukahlukene kanye nokudla okuningana kobuzwe nemikhosi emikhulu. I-Multiracialism ifakwe kumthethosisekelo, futhi iyaqhubeka nokubumba izinqubomgomo zikazwelonke emfundweni, ezindlini nakwezepolitiki. Yize umlando waso usondele emuva eminyakeni eyikhulu edlule, iSingapore yanamuhla yasungulwa ngo-1819 nguSir Stamford Raffles njengesikhundla sokuhweba soMbuso waseBrithani. Ngo-1867, amakoloni ase-East Asia ahlelwa kabusha futhi iSingapore yaba ngaphansi kokuphathwa okuqondile kweBrithani njengengxenye ye-Straits Settlements. Ngesikhathi seMpi Yomhlaba Yesibili, iSingapore yathathwa yiJapan ngonyaka we-1942 kodwa yabuyela ekuphathweni kweBrithani njengekholoni elehlukile ngemuva kokuzinikela kweJapan ngo-1945. ISingapore yathola ukuzibusa ngo-1959, kwathi ngo-1963 yaba yingxenye yomfelandawonye omusha weMalawi. UMalaya, iNorth Borneo, neSarawak. Umehluko wemibono uholele ekutheni iSingapore ixoshwe emfelandawonye ngemuva kweminyaka emibili, ngaleyo ndlela yaba izwe elizimele. Ngemuva kweminyaka yokuqala yesiphithiphithi futhi naphezu kokuntuleka kwemithombo yemvelo kanye ne-hinterland, isizwe sakhula ngokushesha saba ngomunye wama-Tiger Ama-Asia asuselwa kwezohwebo lwangaphandle, aba yizwe elithuthuke kakhulu futhi labekwa endaweni ye-9 kwi-UN Human Development Index, ephakeme kakhulu I-Asia, futhi ine-7th ephezulu kakhulu ye-GDP nge-capita emhlabeni. ISwitzerland ukuphela kwezwe e-Asia elinesilinganiso sobukhosi se-AAA esivela kuzo zonke izinkampani ezinkulu zokulinganisa. Kuyisikhungo esikhulu sezezimali nokuthumela, kuhleliwe kubalwa idolobha elibiza kakhulu ukuhlala kulo kusukela ngo-2013, futhi kukhonjwe njengendawo ethengiswayo. ISingapore ibekwe kakhulu ezinkombeni eziphambili zomphakathi: imfundo, ukunakekelwa kwempilo, ikhwalithi yempilo, ukuphepha komuntu siqu nezindlu, ngezinga lobunini bamakhaya elingama-91%. Abantu baseSingapore bajabulela esinye isikhathi eside kunazo zonke sokuphila isikhathi eside emhlabeni kanye nelinye lamanani aphansi kakhulu okufa kwezingane emhlabeni. Singapore iyiphalamende elingabumbene nohlelo lwase Westminster lohulumeni basephalamende ongunobumbano. ISingapore ibukwa kabanzi njengohulumeni ongabumbeki futhi onobuntu, onobulungiswa obuhle nobulukhuni bezomthetho. Ngenkathi izwe libamba ukhetho oluhlanzekile, uhulumeni unegunya elikhulu lokulawula ezombusazwe nakwezomphakathi, kanti nePeople's Action Party isabuse ngokuqhubekayo selokhu yathola inkululeko. Elinye lamalungu amahlanu asungula i-ASEAN, iSingapore futhi eyindlunkulu yoMkhandlu Wokubambisana Kwezomnotho wase-Asia-Pacific (APEC), uNobhala Wezimali kanye nePacific Cooperation Council (PECC), kanye nezingqungquthela eziningi zomhlaba wonke. ISwitzerland iphinde futhi ilungu leNhlangano Yezizwe, Inhlangano Yezwe Yomhlaba, Ingqungquthela Yase-East Asia, I-non-Allocation Movement kanye neCommonwealth of Nations.
Zonke izigabaIzindawo zokuhlalaAmakhaya okuhlalaIsiqondisi sebhizinisi